Download Facetime maka Windows 10 PC, Desktop & laptọọpụ 🤑
1 Download FaceTime n'ihi na windo Pc na laptọọpụ 32bit – 64bit
1.1 Ngwa maka Windows:
1.2 FaceTime Atụmatụ:
1.3 Ụfọdụ n'ime coolest Akụkụ nke FaceTime
2 Chọrọ maka FaceTime:
Download FaceTime n'ihi na windo Pc na laptọọpụ 32bit – 64bit
Hello Facetime Ara! Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye ofufe nke FaceTime ngwa na a na-eji na gị na iPhone na MacBook mgbe ị nwekwara ike ịhụ nke a ngwa gị window pc.
Facetime n'ihi na windo 10
Facetime n'ihi na windo 8
Facetime n'ihi na windo 7
Facetime n'ihi na windo na laptọọpụ
download Facetime n'ihi na windo
N'ụzọ ụfọdụ, i kwesịrị ime ihe ụfọdụ aghụghọ ibudata ma wụnye Facetime gị Ohere pc.
Ya mere Isiokwu a na-enye ihe niile ozi ndị dị mkpa nke ga-akụziri otú i nwere ike ibudata ma wụnye FaceTime on Non-iOS ikpo okwu dị ka Windows 7, 8 na Ohere 10.
FaceTime bụ otu n'ime ndị kasị a ma ama na Apple si video na ọdịyo ọkpụkpọ ngwa. N'oge gara aga, ndị mmadụ na-eji na-ejikọrọ na onye ọ bụla ọzọ na-enyemaka nke omenala igwe ma ọ bụ handsets ma FaceTime ka tremendously gbanwere a na-emekarị. Ugbu a ndị mmadụ nwere ike conveniently eme ekwentị oku, ozi na ọbụna video oku na-enyemaka nke a Facetime ngwa.
Nke a na-enye ohere na ekwentị gị ka na-jikọọ na ndị ọzọ site na cellular netwọk ma ọ bụ Wi-Fi njikọ. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na-eme ka na-akparaghị ókè video oku na ndị enyi ha, ezinụlọ na azụmahịa na kọntaktị na a na-akwado iPod, iPhone, iPad, Mac ma ọ bụ Windows via online videotelephony.
Nke a ngwa oke itunanya ebelata anya n'etiti ndị mmadụ na-eme ka ọ nnọọ mfe ịnọgide na-eleta gị na ọrụ ha.
Ná mmalite, Apple mepụtara ngwa n'ihi ya IOS na Mac os na ngwaọrụ na mgbe e mesịrị na, ruru ya ewu ewu, ọ dị ugbu a n'ihi na windo dị ka nke ọma.
Ma ka a na-eji ngwa na gị na window gị mkpa-atọ ndị ọzọ echichi. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-ekere òkè na stepwise echichi nke a na ngwa na ike tinye n'ọrụ na windo.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata banyere ya n'ihu, biko-anọgide na-agụ isiokwu anyị. Anyị ga-ekere òkè ụfọdụ ihe ọmụma na-akpali data banyere nke a ngwa.
Site na njedebe nke isiokwu a, ị ga-enwe ike inwe ọkacha mmasị gị Facetime ngwa na gị windo
Ngwa maka Windows:
FaceTime na-aghọ otu n'ime coolest video akpọ ngwa ọdịnala na online video telephony na achịala niile ọzọ ibu asọmpi dị ka Google Duo, Skype, WhatsApp, Imo, Bingo na ndepụta. The ngwa n'onye ezi omume ọ bụ uru na-enye elu àgwà na-agbanwe agbanwe visual na audio pụta.
Ọzọ asọmpi atụmatụ a ngwa bụ na ọ nwere onye ọrụ-enyi na enyi interface. Ndị ọzọ na-adụ wares na ahịa software-enweghị ike inye na bandwit.
-Atọ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ndị wepụtara software ka eme ka o kwe onye ọ bụla iji wụnye Apple si ukara ngwa na Windows 7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. ugbu a, ọ bụ mee ka ị na FaceTime si windo iPhone, windo iPad, windo Mac & windo windows.
All na ị chọrọ bụ a na-agbanwe agbanwe internet njikọ na ngwa bụ kpam kpam free nke na-eri na-eji na windo.
FaceTime ngwa karịa ndị ọzọ nile na videotelephony software dị ka akọwara n'elu. Images dị nnọọ nkọ na elu definition visuals na a bụkwaara ịnọchi ihe ndị ọzọ nile nhọrọ dị na online ahịa.
Ụfọdụ n'ime coolest Akụkụ nke FaceTime
FHD- Full elu Definition visual bụ isi akụrụngwa nke ngwa.
Enyi na Enyi ọrụ-interface na-eme ka ọ na ihe na mmekọrịta maka ọrụ
Ojiji bụ na-akparaghị ókè n'aka ị nwere ike ijikọ n'ebe ọ bụla na oge obula.
Easy hazie gị kọntaktị na ndepụta
Favorite ndepụta kọntaktị gị enyere gị aka iru na nanị otu click
Free nke na-eri ọkpụkpọ bụ ihe ọzọ plus n'ókè nke na-anọ ejikọrọ.
Group video ọkpụkpọ na-enyere gị jikọọ multiple ọrụ n'otu oge.
Ide ozi n'ekwe ntị na-ekwe omume na ngwa.
Spammers na-adịchaghị mkpa ọrụ nwere ike zoro ezo ma ọ bụ na-egbochi si ndepụta.
Ọrụ nwere ike jikọọ dị iche iche ngwaọrụ dị ka PC, Windows, iPhone, iPad, iPod, Mac.
Chọrọ maka FaceTime:
Ndị a bụ ndị dị otú ahụ mma na anyị ji n'aka na-agụ akwụkwọ anyị ga-ahụ n'anya na-enweta ngwa. Ọ dị oké mkpa ịghọta ihe ndị bụ isi a chọrọ tupu wụnye a FaceTime ngwa n'ihi na windo. Ihe bụ isi a chọrọ na-agụnye
Gị windo version kwesịrị dịkarịa ala XP. N'ihi na a mma ahụmahụ, anyị ga-egosi na ị na kwesịrị nwere windo & ma ọ bụ mgbe e mesịrị nsụgharị.
The CPU ọsọ ga-adị elu karịa 1GHz.
The RAM kwesịrị a kacha nta nke 2 GB ma ọ bụ n'elu.
E kwesịrị a na-akwado wuru na-igwefoto maka video ọkpụkpọ ma ọ bụ ọzọ chọta a obere akwado igwefoto n'ihi nzube a.
maka audio ọkpụkpọ, ị ga-enwe a okwu. Nzuzo nchegbu ọrụ kwesịrị iji ekweisi na wuru na-microphones.
Ihe kacha mkpa bụ inwe ezigbo internet Njikọta.
Dị ka e kwuru na mbụ na FaceTime bụ ihe ukara ngwa nke Apple na mmepe ma wepụtara ọ bụla version n'ihi na windo naanị.
N'ihi ya, i nwere ike na-enweta nke a na ngwa si ukara website na ngwa format eji maka niile IOS na Mac ngwaọrụ. Ọ dabara nke ọma maka Windows, anyị nwere ụfọdụ mmemme dị online iji wụnye ya site na atọ ọzọ omume.
Ka anyị na-akọrọ na-agụ akwụkwọ anyị ebe a nzọụkwụ site nzọụkwụ nbudata usoro ebe a:
Gam akporo emulators a tọhapụrụ site na-atọ ndị ọzọ na mmepe iji wụnye dị iche iche format. Ndị a ngwa software-enye gị ohere na-agba ọsọ Ngwa format files nke FaceTime na gị windo. Ọ bụrụ na ọ na-ama arụnyere na gị usoro, dị nnọọ na-eso usoro. N'ihi na Newbies, biko download BlueStacks si nyere njikọ:
Nke a bụ n'ụlọ peeji nke www.bluestacks.com
The usoro na-software na-kpam kpam iwu ka-na na na zuru.
The file size bụ nnukwu nke ruru. 469MB na ọ ga-ewe a mgbe ina ebudatara.
Mgbe ọ na-ebudatara, wụnye ya na mgbe ọ na-eme, Malitegharịa ekwentị gị na windo.
Open BlueStacks ngwa site na mmalite menu. Ọ ga-ewe oge na-ebute mbụ gburugburu ebe obibi na mmekọrịta ndabere apps nyere site usoro ihe omume. N'ihi ya, anaghị ịkwụsịtụ mbụ usoro.
Ozugbo omume na-amalite, gaa na menu na pịa na play ụlọ ahịa ngwa.
na play ụlọ ahịa, chọta FaceTime na search nhọrọ.
Download ngwa na pịa "na-agba ọsọ"Ka ozugbo wụnye ngwa. I nwekwara ike ịzọpụta download file ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji wụnye ya mgbe e mesịrị.
Mgbe ị dị njikere wụnye ngwa na gị usoro na soro ntuziaka.
N'oge na nwụnye usoro, i nwere ike-kpaliri maka nchịkwa ikike ma ọ bụ nchịkwa paswọọdụ ma ọ bụ nkwenye. Biko pịnye achọrọ paswọọdụ ma ọ bụ ọmụma ase.
N'ikpeazụ, FaceTime dị njikere na-eji na gị windo.
Mepụta gị onwe gị na onye ọrụ Id na paswọọdụ na otu a ga-eji mgbe ọ bụla ị ga-achọ ka nbanye.
Mgbe ị ga-agba ọsọ na-eji ngwa n'ihi na oge mbụ, ị ga-kpaliri ịbanye ọrụ NJ na paswọọdụ. Dị ka unu na-ama kere gị onwe gị pụrụ iche ọrụ ID na paswọọdụ, ọ ga-achọrọ ebe a ka n'ihu na-agba ọsọ nke usoro ihe omume. Ozugbo mbụ pụrụ iche ID e kere eke usoro a na-eme, isi interface ga-egosipụta.
All kọntaktị kwukwara, zoro ma ọ bụ na-egbochi na-achịkwa site na isi interface. Gaa mmasị setịpụrụ na-hazie ya dị ka kwa gị chọrọ. dị ka iPhone, iPad, iPod & Mac, ị nwekwara ike igwu na ngosipụta ọnọdụ. Ebe a ị na-adịghị bugharia ihuenyo i ma i nwere ike ime mgbanwe ụfọdụ na dị nhọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-eji FaceTime maka oge mbụ na chọrọ ịmara banyere ya ọzọ, ị nwekwara ike ịga nkwado ha website maka ụfọdụ ihe ọmụma zuru ezu. The njikọ e nyere n'okpuru:
N'uwa nyeere ndị mmadụ gburugburu ụwa n'ihi na ihe exposures na ọganihu. FaceTime bụ banyere nwụchiri a biya ma ọ bụ Foto Ụlọ Nga na ịkọrọ ya ndụ na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ naanị.
Ọ massively nyeere mba ahịa na anọ n'ọnụ onye ọ bụla ọzọ.
Apple bụ mgbe niile atọhapụ ọhụrụ nsụgharị nke FaceTime maka mma na ya pụta na karịsịa nri ọrụ chọrọ.